Miandry izao tontolo izao manontolo
“Mandehana ho eny amin’ny lalam-be sy ny sisim-boly, ka tereo ny olona hiditra, mba ho feno ny tranoko”. Lio. 14:23
Maneho fahalianana goavana amin’ity vovoka bitiky ny tany ity ny tontolon’ny lanitra iray manontolo, satria nandoa onitra tsy hita fetra ho an’ny fanahy izay monina ao i Kristy.
Ny zavatra rehetra eto amin’izao rehetra izao (univers) dia miantso ireo izay mahalala ny fahamarinana mba hanamasina ny tenany tsy amim-pihambahambana ho amin’ny fanambarana ny fahamarinana araka izay nampahafantarina azy ireo ao amin’ny hafatry ny anjely fahatelo. Ny asan’ny fikambanan’i Satana dia miantso ny kristin=anina mba hijoro ao amin’ny laharany.
Ny asa nomena antsika dia goavana sy manan-danja tokoa, ary ilàna fahendrena izany,olona tsy ia tena, olona mahatakatra ny hevitry ny fanoloran-tenany ho amin’ny ezaka famonjem-panahy. Fa tsy misy ilàna ny fanompoana ataon’ny olona matimaty, satria ny olona toy izany dia tsy azon’i Kristy ampiasaina. Ny lehilahy sy vehivavy ilaina dia ireo izay manana fo voatohin’ny fahorian’ny olombelona ary ny fiainanay dia mampiharihary fa izy ireo dia mandray sy mizara fahazavana sy fiainana ary fahasoavana.
Tokony hanatona akaiky an’i Kristy ireo vahoakan’Andriamanitra, amin’ny fandavan-tena sy ny fanaovana sorona ny tena, ny tanjony tokana dia ny hanome ny hafa-pamindrampo ho an’izao rehetra izao. Ny sasany hiasa amin’ny fomba iray ary ny sasany amin’ny fomba hafa, araka izay hiantsoan’ny Tompo sy hitarihany azy ireo. Saingy mila miara-miezaka mafy izy ireo, mikatsaka mba hahatanteraka ny asa manontolo.
Tsy hihemotra akory ny fiangonana rehefa mikatsaka fanampiana avy eo amin’ny seza fiandrianan’ny fahasoavana ny mambra ao aminy, mba tsy hahatonga azy ireo tsy hahomby amin’ny fiaraha-miasa amin’ilay asa lehiben’ny famonjena ireo fanahy eo amoron’ny fahapotehana (...)
Ny tontolon’ny lanitra manontolo dia miandry fantsona voamasina, izay azon’Andriamanitra ifandraisana amin’ny olony, ary amin’ny alalan’izy ireo amin’izao tontolo izao. Andriamanitra dia maniry hiasa amin’ny alalan’ny fiangonana voamasina feno fandavan-tena ary haneho ny Fanahiny Masina amin’ny fomba hita maso sy be voninahitra, indrindra amin’izao fotoana izao, rehefa miasa amin’ny fomba mahery vaika mba hamitaka ireo fanahin’ny mpiasa sy ny vahoaka mitambatra i Satana.
Moa ve tsy hifoha ho amin’ny andraikiny ny fiangonana? Miandry ny hanomezany ny Fanahin’ny misionera lehibe izay mbola tsy fantatr’izao tontolo izao andriamanitra ho an’ireo izay maniry hiasa amin’ny fandavan-tena, fanaovana sorona ny tena ho amin’ny asa Masina.